काठमाडौं । मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भारतीय दूतावास लैनचौर पुगेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद भङ्ग गर्दै चुनावमा जाने मिति तय गरेपछि उनी भारतीय दुतावास छिरेका...
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) ले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन आग्रह गरेको छ । उसले महाभियोग लगाएर संविधानको रक्षा गर्न र यथाशीघ्र नयाँ सरकारको बाटोमा अग्रसर हुन आग्रह गरेको...
काठमाडौं । कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचारका लागि प्रयोग गरिने रेम्डेसिभिर औषधि नेपालमा नै उत्पादन हुने भएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले रेम्डेसिभिर उत्पादन गर्ने अनुमति दिएपछि नेपालमा नै उत्पादन हुने भएको हो । विभागका सूचना...
दुर्गा भवानी (कन्चन) मैले जेजे गरे पनि बिर्सी देउ है सानु! गुन जति सबै तिमीले जलमा घोली खानु। ईष्र्या ,रिस राग हेर केही नि छैन मनमा! बरु तिमी आफूले चाहिँ मनमा लिनु चैन! अगाडि छौ तिमी सधैं अगाडि नै...
काठमाडौँ । काठमाडौँबाट रुपन्देही (बुटवल)को भाडा कति ? रु ६०० या रु एक हजार । गाडी नै नपाएका बेलामा रु एक हजार वा भनौँ रु १२ सयसम्म पनि मानिसलाई तिर्न गाह्रो नहोला तर बुटवलका...
पर्सा। बाराको परवानीपुर गाउँपालिका बहुवरी वडा नं ५ मा आज बृहत रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । परवानीपुर बारा कार्यपालिका सदस्य सन्जु साह को आयोजना र स्वच्छ समाज युवा क्लब परवानीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षले मुलुक संकटमा परेको बताएका छन् । इटहरीमा रहेर युवाहरुलाई रोजगारि दिदै आएको पाथीभरा एड्भटाईजिङ्ग तथा पाथिीभारा जव लिङकको सातौ वार्षिक उत्सवका...
ऐजेन्सी । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले बिहीबार फाइजर–बायोएनटेकले विकास गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ । संगठनले खोप स्वीकृत गरेसँगै विश्वका विभिन्न देशले फाइजरका खोप आयात र वितरण गर्न थप...
काठमाडौं । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येझाउ नेतृत्वको टोली काठमाडौं आएका छन् । उपमन्त्रीसहित चार सदस्यीय टोली आइतबार मध्यान्ह त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको...
काठमाडौं । जापानले विभिन्न मुलुकहरुबाट आउने विदेशी नागरिकहरुलाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । जापानमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नयाँ प्रकार (भेरियन्ट) भेटिएसँगै सोमबारबाट लागू हुने गरी जापानले विदेशी नागरिकलाई मुलुक प्रवेशमा रोक...